Inye ezimbini ezimbini zikaMbane Co, Ltd.
Enye yeziBini zombane zombane Co., Ltd. ise-Yueqing, kwiPhondo laseZhejiang, ikomkhulu lezixhobo zombane zase China, le nkampani ngumenzi okumgangatho ophezulu ojolise kuphuhliso kunye nokuveliswa kwezixhobo zombane ezisezantsi-ombane ezinje ngecala elibunjiweyo lesekethe Ukuphuka kwesekethe yomoya, ikhefu yesekethe encinci, ikhefu lesekethe yokuvuza, ulawulo kunye nokhuseleko lokhuselo, amandla ombane azenzekelayo, iswitshi yokuzahlula njalo njalo. Lishishini lobuchwephesha obuphezulu elidibanisa i-R & D kunye nemveliso. Ngobuninzi beSatifikethi seetekhnoloji enelungelo elilodwa lomenzi, iimveliso ziqinisekiswe yi-GB, CE, CCC, njl.
Le nkampani ithatha ulawulo lwezenzululwazi njengeyona nto iphambili, ithatha iimfuno zomsebenzisi, umgangatho wemveliso kunye nenkonzo enononophelo njengeziko lengcinga yeshishini, ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kwiimarike ezahlukeneyo nakwiindawo ezahlukeneyo zesicelo, ukulungiselela ukubonelela ngokusebenza okuphezulu kunye
Ukubambelela kwixabiso lokuhlonipha abantu, ukuphuhlisa amandla abantu, kunye nokulandela umphefumlo wabantu njengenjongo yomsebenzi, Kwinkampani yethu, abantu abaqhelekileyo baya kuba ngabantu abagqwesileyo, Umjelo ozinzileyo wabantu apha bayawaqonda amaphupha abo obomi, bahlakulele iqela leetalente lexesha elide eliphumelela ubunkokheli bemakethi, sidala izibonelelo zombutho, kwaye sikhokele ukujongwa kwexabiso, sinengqondo yokuthunywa kwaye iqela elinoxanduva, kwaye siyakuxhasa ukufezekiswa kweenjongo zesicwangciso kunye nokusukelwa kwetalente.
Inkampani iyabakhathalela abasebenzi kwiinkalo zobomi, iimvakalelo kunye nokukhula.
Abasebenzi benkampani bayawaxabisa amaphupha abo angaphakathi kunye nezinto abazenzayo. Kuba banamaphupha, banamandla ngakumbi, bayile, kwaye banamandla okuqhuba ukogqitha eminye imibutho kunye nabantu ukuphucula imeko yabo.
IQELA LOBUGCISA R & D
Okwangoku, inkampani ineqela lobugcisa be-r & d yabantu abangaphezulu kwama-70, kubandakanya iinjineli ezi-2 eziphambili, iinjineli zeprojekthi ezi-8, iinjineli eziphezulu ezili-13, iinjineli ezingama-28 kunye nabanye abasebenzi abangama-29.
Inkampani ibambelela kwinto entsha yenzululwazi kunye netekhnoloji, esazisa rhoqo abasebenzi abaqeqeshiweyo, izinikele ekuphuhliseni iimveliso ezikhuselekileyo, ezinokuthenjwa, ezikrelekrele, zokonga umbane kunye nezisombululo kubathengi.
Inkampani inoluhlu olubanzi lokusebenzisana namaziko enzululwazi kunye netekhnoloji, iikholeji zobungcali kunye neengcali zobuchwephesha, kunye nophuhliso lweemveliso ezintsha njengezona zinto ziphambili, kwaye zihlala zikhuthaza inkqubela phambili kwezobuchwephesha.
IQela loPhando lobuGcisa
ITHEKNOLOJI YOKUTHENGA UTSHINTSHO
Kule minyaka idlulileyo, inkampani ibigxile kuphando lwetekhnoloji kunye nolawulo lophuhliso lweemveliso njengomsebenzi obalulekileyo. Kwelinye icala, ikhuthaza ngamandla uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso, kwisiseko senkqubo yohlengahlengiso lwenkqubo, ibambelela kwintengiso, ejolise kwinzuzo, yomeleza uphando oluzimeleyo lwemveliso kunye nophuhliso, yomeleza uphando lobuchwephesha besicelo, ikhulisa imveliso enexabiso eliphezulu , Umxholo wetekhnoloji ephezulu kunye nokuthengisa, kwaye kwelinye.
Kwelinye icala, kufuneka sandise ngokubonakalayo ukusebenzisana namaziko ophando lwezenzululwazi, iikholeji zobungcali kunye neengcali zobuchwephesha, sinike umdlalo opheleleyo kwizibonelelo zabo zobuchwephesha, sifunde kumandla omnye komnye kwaye senzele ubuthathaka bomnye nomnye, sikhuthaza inkqubela phambili yetekhnoloji, sizibophelele ekuphuhliseni ukhuseleko , iimveliso zombane ezinokuthenjwa nezikrelekrele kunye nezisombululo kubathengi.
Kwiminyaka yakutshanje, intsebenzo yentengiso yenkampani igcine ukukhula ngokukhawuleza, ngelixa inyusa inani lotyalo-mali lwe-R & D kwitekhnoloji unyaka nonyaka.
Ukuze kuqinisekiswe inqanaba lezixhobo zeshishini, inkampani yazisa ngenkuthalo izixhobo zemveliso zamanye amazwe kunye nokuvavanywa kwamagama, ukomeleza uphando kunye nokuvavanywa, inkampani ngoku ineempawu zokuhamba ezinengqiqo, ibhedi yokujonga ngokuzenzekelayo, ulungelelwaniso oluphezulu isixhobo sokulinganisa, isixhobo semicroscope nesinye ukuvelisa kunye nokuvavanya izixhobo zokusebenza. Inkampani iye yamisela iziko elikhulu lokuvavanya, lixhotyiswe ngemveliso yelebhu yomatshini, ilabhoratri yemveliso, elebhu ye-EMC, ilabhoratri esemgangathweni kunye nezinye izixhobo zasekhaya kunye nabaphambukeli bokuqala kunye nokusetyenziswa kwe-putinto, ukuphucula ukusebenza kakuhle kwemveliso, ukuqinisekisa ukuphuculwa okuzinzileyo kwetekhnoloji yemveliso kunye nolawulo lomgangatho.
Sizimisele ukubonelela ngemveliso esemgangathweni, ekhuselekileyo kunye neenkonzo, kwaye sivavanye ngokubonakalayo iimfuno ezinokubakho zabathengi;
Sikhuthaza abantu abaninzi ukuba bathathe inxaxheba kwizinto ezintsha ngendlela evulekileyo, badibanise ubuchwepheshe obutsha kunye neemodeli zeshishini ezibalaseleyo, kwaye bahlala besenza isimanga esonwabisayo.
Siqhoboshela ukubaluleka okukhulu kumava kunye nezimvo zabathengi, rhoqo siphucula inkqubo yolawulo lobudlelwane babathengi, sikhula kunye nabathengi, kwaye siyithatha le nkqubo njengexabiso lokufezekisa ukugqwesa.